कसरी सुरक्षित iPhone मा पासवर्ड सुरक्षित गर्न को लागी मोबाइल फोरम
कसरी सुरक्षित iPhone मा पासवर्ड सुरक्षित गर्न को लागी
डेनियल टेरासा | 07/10/2021 09:00 | म्याक, अपरेटिंग प्रणाली
सही तरिकाले हाम्रो पासवर्ड को प्रबंधन गधा मा हामी मध्ये धेरै को लागी एक वास्तविक दुखाइ हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै यन्त्रहरु, अनुप्रयोगहरु र वेबसाइटहरु छन् कि हामी हरेक दिन ह्यान्डल छौं! प्रयोगकर्ता खाताहरु, डिजिटल बैंकि,, पहुँच कोड ... यो एक गडबडी हो जसमा यो आदेश राख्न को लागी आवश्यक छ, दांव उच्च छन्। यसैले यो जान्न को लागी धेरै रोचक छ कसरी iPhone मा पासवर्ड सुरक्षित गर्न को लागी।
जारी राख्नु भन्दा पहिले, यो केहि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ: होइन, यो एक राम्रो कुञ्जी वा सबै कुरा को लागी पासवर्ड को उपयोग गर्न को लागी होइन। यो खारेज, यो पनि यो यो एक ल्यापटप मा ती सबै राख्न को लागी उचित छैन भनेर औंल्याउन आवश्यक छ। त्यसोभए हामीसँग अरु के विकल्प बाँकी छ? यहाँ एउटा छ: यदि तपाइँसँग एक छ आईफोन, धन्यवाद स्वत: पूर्ण प्रकार्य, तपाइँ तपाइँको सबै पासवर्डहरु बचत गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरु लाई हरेक पटक तपाइँ तपाइँको कुनै पनि खाता मा लग इन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ सुरक्षा मुद्दा को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ, हामी तपाइँलाई तल बताउने सबै कुरा धेरै रोचक हुनेछ:
1 सफारी को लागी स्वतः पूर्ण
2 एप्पल उपकरणहरु को लागी कीचेन
3 आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न को लागी एप्स
3.3 कीपर पासवर्ड प्रबन्धक
3.4 अन्तिम पास
3.5 mSecure पासवर्ड प्रबन्धक
3.6 एक सुरक्षित
3.8 SafeInCloud पासवर्ड प्रबन्धक
सफारी को लागी स्वतः पूर्ण
यदि तपाइँ तपाइँको आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न चाहानुहुन्छ, यो सक्रिय गर्न को लागी आवश्यक हुनेछ स्वत: पूर्ण प्रकार्य। यो कसरी तपाइँ यो गर्नु पर्छ:
पहिले जानुहोस् "सेटिंग"।
त्यसपछि पहुँच पासवर्ड र खाताहरु।
अन्तमा, मा "स्वत: पूर्ण" विकल्प तपाइँलाई स्लाइडर सार्नु पर्छ "मा" स्थिति (हरियो मा)।
एक पटक यो गरिसकेपछि, AutoComplete प्रकार्य तपाइँको iPhone मा सक्रिय हुनेछ। चाहे हामी आईफोन द्वारा सुझाव एक पासवर्ड छान्नुहोस् वा हामी हाम्रो आफ्नै एक को उपयोग गर्ने निर्णय, यो कार्यक्षमता सुरक्षित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड सम्झना हुनेछ र जतिसक्दो चाँडो तपाइँ सत्र शुरू गर्न को लागी प्रविष्ट गरिनेछ। यति व्यावहारिक।
एप्पल उपकरणहरु को लागी कीचेन
Keychain संग हामी सुरक्षित iCloud मा हाम्रो पासवर्ड सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ
जब तपाइँ प्रयोग गर्न को लागी आवश्यक छैन किचेन आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न, हो हामी हाम्रो खाता मा यी पासवर्डहरु राख्न को लागी यो प्रयोग गर्न को लागी हुनेछ आईक्लाउड यो उपकरण वास्तव मा कुनै एप्पल उपकरण को लागी काम गर्दछ।
कीचेन (अंग्रेजीमा शब्द "कीचेन" को अर्थ हो) macOS मा पासवर्ड व्यवस्थापन प्रणाली हो, १ 8.6 Mac मा म्याक ओएस .1997. version संस्करण बाट प्रस्तुत। यो सफ्टवेयर यो पासवर्ड, निजी कुञ्जी र प्रमाणपत्र हुन सक्छ।
कीचेन कसरी आईफोनमा सक्रिय हुन्छ? हामी तपाइँलाई तल व्याख्या गर्दछौं:
पहिलो चरणमा जानुहोस् "सेटिंग"।
त्यहाँ हामी हेर्छौं "एप्पल आईडी" र यो विकल्प भित्र हामी छान्नुहोस् ICloud।
ICloud सेटिंग्स मेनु भित्र, हामी तल स्क्रोल र चयन गर्नुहोस् "कीचेन"।
अन्तमा हामी मा क्लिक गर्नुहोस् "ICloud कीचेन" हरियो स्थिति मा स्लाइडर सार्दै।
कीचेन सक्रिय गरेपछि, तपाइँ म्याक उपकरण (कम्प्युटर वा आईप्याड) मा जानुहोस् आईफोन मा त्यहाँ सुरक्षित पासवर्ड को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनुहोस्। यो जानकारी लि link्क गर्न, निम्नानुसार अगाडि बढ्नुहोस्:
पहिले हामी मेनूमा जान्छौं "मन्जाना"।
त्यहाँ हामी पहिले छान्छौं "प्रणाली प्राथमिकताहरू"पछि, "एप्पल आईडी" र अन्तमा ICloud।
समाप्त गर्न को लागी, हामी बस विकल्प मा क्लिक गर्नेछौं "कीचेन"।
यो iCloud किचेन सुरक्षित तरिकाले हाम्रो पासवर्डहरु को प्रबंधन को लागी एक महान उपकरण हो। जे होस्, तपाइँको सुरक्षा एप्पल पारिस्थितिकी तंत्र भित्र प्रयोग गर्न को लागी सीमित छ। यसको अतिरिक्त, केहि बगहरु यसको अपरेशन मा रिपोर्ट गरीएको छ, जसले धेरै प्रयोगकर्ताहरु लाई आफ्नो कुञ्जीहरु को लागी एक बाह्य अनुप्रयोग को लागी अप्ट गर्न को लागी प्रोत्साहित गरेको छ। यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी छन्:
आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न को लागी एप्स
यो सूची मा अनुप्रयोगहरु पनि हामीलाई आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यसको मतलब उनीहरुलाई चाँडै प्रविष्ट गर्न को लागी जब हाम्रो खाताहरुमा लग इन गरीरहेको छ। हामी के चाहन्छौं मात्र। यो सत्य हो कि यसको संचालन कहिले काहिँ AutoComplete प्रकार्य को तुलना मा केहि अधिक जटिल छ, तर यसको प्रभावकारिता शंका भन्दा पर छ। यी सबै भन्दा राम्रो छन्:
सबैभन्दा लोकप्रिय आईफोन पासवर्ड व्यवस्थापन आवेदन: 1Password
सूची सुरु गर्न को लागी, हामी पनी निस्सन्देह यो काम को यस प्रकार को लागी App Store मा सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोग हो, संसारभरिका लाखौं प्रयोगकर्ताहरु संग छ। 1 पासवर्ड प्रदान गर्दछ एक सही र सबै भन्दा माथि हाम्रो पासवर्ड को धेरै सुरक्षित व्यवस्थापन।
दुर्भाग्यवश, 1Password एक नि: शुल्क अनुप्रयोग होइन। यो एक ३० दिन को नि: शुल्क परीक्षण अवधि प्रदान गर्दछ। यस अवधिको पछि, प्रयोगकर्ता पर्याप्त समय यो अनुप्रयोग र लाभ यो भुक्तान संस्करण अनुबंध वा अर्को समाधान को लागी छनौट गर्नु भन्दा पहिले यो प्रस्तावहरु संग आफैलाई परिचित गर्न को लागी हुनेछ।
Dashlane संग आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्नुहोस्
अर्को व्यापक प्रयोग आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न को लागी अनुप्रयोग। Dashlane हामीलाई पासवर्ड को एक असीमित मात्रा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। र पक्कै कहीं बाट उनीहरु को लागी पहुँच। हाम्रो डाटा सबै उपकरणहरु जहाँ अनुप्रयोग स्थापित गरीएको छ, अपरेटि system्ग सिस्टम को उपयोग गरीएको बिना सिnch्क्रोनाइज्ड राखिनेछ।
यो अनुप्रयोग को एक रोचक पक्ष यसको पासवर्ड जेनरेटर हो। तेसैले अन्य उपकरणहरु संग सुरक्षित र आराम संग पासवर्ड साझा गर्न को लागी सक्षम हुने विकल्प हो। सारांश मा, एक शानदार विकल्प हाम्रो पासवर्ड को सही व्यवस्थापन को लागी विचार गर्न को लागी।
कीपर पासवर्ड प्रबन्धक
तपाइँको पासवर्ड, सुलभ र कीपर संग सुरक्षित
यो सुरक्षा हामीलाई दिन्छ कीपर पासवर्ड प्रबन्धक हाम्रो पासवर्ड सुरक्षित राख्न र हाम्रो निजी जानकारी धेरै उच्च छ। यो भन्न सकिन्छ कि यो साइबर अपराधीहरु द्वारा अन्तिम हमलाहरु को बिरूद्ध एक बीमा हो। यो एप को उपयोग गरी शान्तिपूर्वक सुत्न को लागी एक राम्रो तरीका हो।
कीपर पासवर्ड प्रबन्धक हामीलाई असीमित पासवर्ड भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। यो पनि हामीलाई उत्पन्न र बलियो पासवर्ड मा भर्न को विकल्प प्रदान गर्दछ, र, पक्कै, सिnch्क्रोनाइज र बिभिन्न उपकरणहरुमा हाम्रा सबै पासवर्डहरु को प्रबंधन। साथै, यो अनुप्रयोग हो टच आईडी र संग मिल्दो अनुहार ID, जो आफ्नो अनलक विधिहरु प्रदान गर्दछ। अन्य शब्दहरुमा, एक सुरक्षा प्लस कि खाता मा लायक छ।
लिङ्क: कीपर पासवर्ड प्रबन्धक
अन्तिम पास: आईफोन को लागी पासवर्ड प्रबन्धक र प्रबन्धक
पासवर्ड प्रबन्धक अन्तिम पास यो धेरै धेरै यस सूची मा अनुप्रयोगहरु को बाकी जस्तै काम गर्दछ। यसको मुख्य प्रकार्य स्टोर र एक सुरक्षित तरीका मा हाम्रो व्यक्तिगत डाटा र पासवर्ड को प्रबंधन को लागी हो। उस्तै तरीकाले, अरु जस्तै, यो हाम्रो प्रमाण पत्र स्वतः पूरा गर्ने प्रकार्य प्रदान गर्दछ, यसैले म्यानुअल रूप बाट पासवर्ड प्रविष्ट गर्न बाट बच्न।
लिङ्क: अन्तिम पास
mSecure पासवर्ड प्रबन्धक
mSecure: सुरक्षा पहिलो
नाम पहिले नै सुझाव दिन्छ, यो अनुप्रयोग सुरक्षा मा विशेष जोड दिन्छ। सत्य यहि हो mSecure यो पासवर्ड व्यवस्थापन र आईफोन मा व्यक्तिगत डाटा को मामला मा हाम्रो मन र गोपनीयता को शान्ति को लागी एक राम्रो सहयोगी हो। र यो पनी कुनै अन्य उपकरण मा जहाँ हामी यसलाई स्थापित गर्न सक्छौं।
यो अनुप्रयोग को एक हाइलाइट यसको सरल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस र विशेष गरी प्रविष्टिहरु को यसको असीमित संख्या हो। त्यो हो, तपाइँ कुनै पासवर्ड बिना तपाइँ चाहानुहुन्छ धेरै पासवर्ड बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यसको एन्क्रिप्शन मोडेल लाई हाइलाइट गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ, पूर्ण रूप मा नवीनतम संस्करण मा नवीकरण। अन्तमा, यो उल्लेख गर्नु पर्छ कि mSecure एक उपयोगी पासवर्ड जनरेटर र २० भन्दा बढी निर्मित टेम्प्लेट छ।
लिङ्क: mSecure पासवर्ड प्रबन्धक
OneSafe +, उच्च सुरक्षा ईन्क्रिप्शन संग सुसज्जित अनुप्रयोग
जब यो शुरू भएको थियो, यो अनुप्रयोग को रूप मा पदोन्नत गरिएको थियो "तपाइँको पकेट को लागी सुरक्षित सुरक्षित"। र यद्यपि यसको सुविधाहरु कमोबस्त उस्तै छन् वा यो सूची मा अन्य अनुप्रयोगहरु द्वारा प्रस्ताव गरीएको जस्तै हो, यो सत्य हो कि यसले हामीलाई केहि साँच्चै अद्वितीय पहलुहरु पनि दिन्छ।
उदाहरणका लागि, OneSafe + यो डार्क मोड, सिरी सर्टकट, एप्पल वाच र धेरै अन्य प्रकार्यहरु को उपयोग गर्ने क्षमता छ। सुरक्षा को कडाई बाट बोल्दै, यो अनुप्रयोग AES-256 ईन्क्रिप्शन (मोबाइल उपकरणहरुमा अवस्थित उच्चतम स्तर) को माध्यम बाट हाम्रो डाटा र पासवर्ड को सुरक्षा को ग्यारेन्टी।
लिङ्क: एक सुरक्षित +
सम्झनुहोस्, भालु अनुप्रयोग आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न
एक सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरु को एक सुरक्षित र कुशल तरीका मा आईफोन मा पासवर्ड को प्रबंधन को लागी। रेमबियर यो व्यापक रूपमा यसको "शुभंकर" को लागी परिचित छ, भालु जसले हामीलाई हाम्रो पासवर्ड र प्रमाण पत्र याद गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ हामी जान्छौं।
एक धेरै दृश्य र रमाईलो ईन्टरफेस को माध्यम बाट, यो अनुप्रयोग बनाउन को लागी एक सरल र सीधा तरीका, स्टोर र पासवर्ड को उपयोग प्रदान गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो पनि हामीलाई क्रेडिट कार्ड बचत र सुरक्षित र छिटो अनलाइन खरीद गर्न अनुमति दिन्छ। भुक्तानी हामी हाम्रो आईफोन संग बनाउँछौं छिटो छ, किनकि रिमेम्बियरले हाम्रो कार्डमा जानकारी स्वतः पूरा गर्ने ख्याल राख्छ। र सबै सुरक्षा र विश्वास को उच्चतम स्तर संग।
SafeInCloud पासवर्ड प्रबन्धक
SafeInCloud, आईफोन मा पासवर्ड बचत गर्न
सूची बन्द गर्न को लागी, संसार भर मा सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने अनुप्रयोगहरु मध्ये एक: SafeInCloud। यो प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा सजिलो अनुप्रयोगहरु मध्ये एक हो, यो अर्थ बिना कि यो कम कुशल र अरु को तुलना मा सुरक्षित छ। तपाइँ दुबै टच आईडी र अनुहार आईडी संग लग इन गर्न अनुमति दिन्छ। यसको अतिरिक्त, यो एप्पल घडी को लागी एक विशिष्ट आवेदन छ।
छोटो मा, एक पासवर्ड प्रबन्धक जसले हामीलाई हाम्रो लगइन, पासवर्ड र एक ईन्क्रिप्टेड डाटाबेस मा सुरक्षित रूप मा अन्य जानकारी राख्न को लागी अनुमति दिन्छ। अधिकतम सुरक्षा। उस्तै तरीकाले, यो सूची मा अन्य अनुप्रयोगहरु संग, यो मा भण्डारण सबै डाटा हामी कुनै पनि उपकरण मा सि use्क्रोनाइज गरिनेछ, जब सम्म हामी यो उनीहरुमा स्थापित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » कसरी सुरक्षित iPhone मा पासवर्ड सुरक्षित गर्न को लागी
मेरो आईफोन खोज्नुहोस् कसरी असक्षम गर्ने